XOG+WARBIXIN: Maxaan ka ognahay cilaaqaadka dahsoon ee ka dhexeeya Al-Shabaab iyo Somaliland – Puntlandtimes
Marka aad maqasho koox argagxiso ah oo geyiga Soomaalida intiisa badan, dalalka dariska la ah Soomaaliya iyo dunida oo idil falal argagixiso oo weerarro toos ah, qaraxyo iyo dilal qorshaysan ka geysata ayaa waxaa uu cilaaqaad kala dhexeeya dad iyo maamul Soomaaliyeed, waxaa markaba kugu soo dhacaya suurto galnimada arrintan iyo sida ay maangal u tahay.
Balse akhri warbixintan kooban oo aannu ku daah-qaadayno xogo loo qaateen ah oo la xiriira nooca cilaaqaad ee ay wadaagaan labadaas dhinac iyo waxaa asaaska u ah iskaashigooda. Inkastoo aanan raalli ka ahayn in bulsho Soomaaliyeed dhibaato ammaan loo geysto hadana ogow Somaliland iyo deegaannadeeda wax fal argagixiso ah kama dhicin todobo ama sideeddii sano ee ugu danbaysay halka koonfurta Soomaaliya, Puntland iyo NDF-ba ay kooxdani dhibaatooyin baaxdleh ka geysanaysay.
Xogo la isku halayn karo ayaa daaha ka rogaya in iskaashi gundhigiisu yahay la dagaallanka nabadda Soomaaliyada ee koonfurta iyo Puntland uu ka dhexeeyo Somaliland iyo Al-Shabaab, kaas oo qorshihiisu yahay inaan nabad waarta ka dhalan koonfurta Soomaaliya iyo Puntland, micnaha ay tani Somaliland u samaynayso ayaa ah iney geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaan sidii aan Soomaaliya dowlad xoog lihi uga dhalan lahayn, waxaana ay doonistoodaas u arkaan mid ka qayb-qaadanaysa qorshohooda ictiraaf raadinta oo waxaa siyaasiyiintoodu aaminsan yihiin haddii Soomaaliya dowladi ka dhalato iney sii fogaanayso rajadooda aqoonsi raadintu.
Al-Shabaab dhinaceeda, waxay heshiiskan ka faa’iidaysaa iney gabbaad marti gelin ah ka helayso Somaliland iyo iney u tahay jid ay iskula xiriiraan kuwooda kala jooga koonfurta Soomaaliya iyo buuraha Cal-madow ee sil-siladda Golis, waxaa kale oo ay cilaaqaadka Somaliland ku qabaan sida ilahani tilmaamayaan kaalmo dhaqaale iyo iney kala shaqeeyaan istaraatiijiyadaha ayku fulinayaan weerrarada qorshaysan ee ayka geystaan Soomaaliya inteeda kale.
Ilo sirdoon ah ayaa xaqiijinaya iney fariismo dadka rayidka ah ka dahsoon Al-Shabaab ku leeyihiin Hargeysa iyo Burco, fariisin-kooda ugu weyna waa Ceerigaabo oo Sanaag ah, balse ayka taliso Somaliland.
Xaqiiqooyin kuu bidhaamminaya dhab ahaanshaha xiriirka Shabaab iyo Somaliland:
Sheikh Maxamed Cabdi Godane oo ciidamada Mareykanku ku dileen koonfurta Soomaaliya wuxuu kasoo jeeday dhalasho ahaan Somaliland, waxaana intii uu noola la xaqiijiyey in labadii sanaba ay uur qaadi jireen labo xaas oo u deganaa magaalada Hargeysa, waxaana xogtaasi sidoo kale bidhaaminaysaa inuu si caadi ah oo aan cabsi lahayn Hargeysa ku dhex joogi jirey marka uu booqanayo qoysas-kiisa halkaas ku nool. Xaqiiqo kale ayaa ah in markii xurguf colaadeed dhex marto Puntland iyo Somaliland, Al-Shabaab-na dhaq-dhaaqyo ka bilowdo deegaannada Puntland gaar ahaan buuraleyda Golis iyo meelo kale oo gobolka Sanaag ah, taasna ayka marakacayso isku xirnaanta falsafadaysan ee labadaas dhinac. Ku darso oo marar badan ayey siyaasiyiin-ta Somaliland ee waaweyn gaar ahaan hoggaamiyayaasha xisbiyadu tilmaameen ineysan maslaxad u arag in koonfurta Soomaaliya degto oo nabad hesho, taas oo ka dhigan iney taageersan yihiin sii socoshada qalalaashaa Shabaab ka waddo koonfurta dalka.
Marka aad si dhugleh oo ka madax bannaan il cadiifadeed u eegto tuhunnadaas isbiirsaday ee ku gedaaman xiriirka Somaliland iyo Al-Shabaab, akhriste miyeysan kuu soo baxayn dhab ahaan-shaha arrintan oo ay macquul tahay inaad horay u maqashoonayd. Inkastoo macluumaad-kani noqon karo mid lagaga go’aan qaadan karo qaddiyaddaas, hadana waxaannu diiradda saari doonnaa inaan helno xog intaas kasii baahsan, taas oo ugu danbayn aan rajeynayno iney bannaanka soo dhigto wixii walba ee la xiriira iskaashiga labadaas dhinac.
Hhhhhawoood markad wayday ma waxa inaga maraysa warkan aad shektay markay dhul inaga qabsaden miyan calcal la dul korna dadka war beenta iyo fanka ina dile ama alshabab xoog ino qabta ama naga dhaaf warka beenta
HORTA PUNTLAND MAXAY TAHAY?
Hartigu waa in ay ka qajilaan catawga faraha batay ee ay meel kasta iskugu ceebeynayaan. Fadeexad iyo kashifaad xun bay xaqiiqdii ku tahay iyo wax aad looga dhiidhiyo. Warbaahiyeeyaasha magaca Puntland iyo afka Harti wararka ku soo tabiya ayay caariyadani saarantahay iyaga na.
Waa marka hore ee “Somaliland”-tan la idin ku xuuxiyay maxaad uga warrantaan sida ay tahay wax sidaas u weyn oo jira? Marka aydun uga hadashaan oo ku na tilmaantaan sida dal rasmi u jira ee ciidan rasmi ah leh idinka ayaa ku dhacay imtixaanka barabagaaneed ee aasaasiga ah. “Somaliland” wax aanay ahayn baad ku buunbuuniseen oo xanuun dhimirka ah bay fallaagada yar ee SNN idin qaadsiisay ee isku xishooda reer Puntlandnoow.
Hartigu waa dad aad u liita ee aan ba dhaadnayn Puntland waxa ay tahay iyo macnaha ay ku fadhido. SNM-ta ah fallaago yar oo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku kooban ayay sumcaddoodu cirkaas isku shareertay sababta oo ah falsafad ay dhab u aaminsan yihiin baa hagaysa oo qaddiyad bayaan ugu cad bay halgankooda ku salaysiiyeen. Puntland oo saddex jibbaar ka tun weyn oo ka tan badanina macnaha ay ku fadhido la ma yaqaanno.
Dad aan falsafad mideysa iyo qaddiyad u qeexan lahayni baylaha weeye oo maanka iyo qalbiga iskaga ma xidhna. Wax sha’nigooda mideeya na ma lahaadaan oo shimbirka ayaa ka dhinsan. Dhaaxaa loo arkay dad aan xanuun colaadeed soo marin oo khataraha soo food saaran iska dhayalsaday ilaa guryahooda loogu soo galay oo ay ba’ayeey kaga yeedhay. Majeerteenku na waa la mid oo Sool, Sanaag iyo Cayn waxa ka dhacaya waxay u la mid tahay wax qaarad kale ka socda ee aan khuseynin. Iska dhega la’aada oo afka uun ka la haya.
cidaa is qabataanba ma shabaabaa waxaan ogaa galmudug oo been aa maraykanka u sheegteen lagu duqeeyey ciidankeediiax
War wixiinnaan hubin hasoo qorina. Nacallaa shaydaan kuyaale
Waa la ogyahay inay SNM koox shufta ah tahay oo shacabka soomaaliyeed ee waqooyi galbeed deggen afduub u haystaan soomaalida inteeda kalena ku diraan oo cadow uga dhigaan
Waxaa kaloo aan shaki lahayn inay SNMtu jecelyihiin soomaalida inteeda kale oo baa ba da iyaguna noolaadaan!!!!!
Oo caalamka ka gadaan dawlad ka madaxbannaan somalia inay yihiin
Laakiin inay shabaab taageeraan waa in loo helaa caddayn haadday ku caaddaato waxaa waajib ku dhammaan ummadda soomaalida in lagu jihaado kooxdaa fallaagada ah oo qabta dhiiggii ummaadda soomaaliyeed
Sir haye says:
Marka tuhunka Beenta ah iyo Ceebaynta laga tago,Puntland baa uga dhow oo la ogyahay Hogaamiyayaasha Daacishta Somalia inay Wada Majeerteen yihiin oo waliba Hogaamiyohoodu Cali Salebaan (Majeerteen) yahay.
HOOS EEG ADAA OGAANAYA INAY PUNTLAND TAHAY HASHA GEELA CUNTA EE CABAADEE,WAXA AY KA CABANAYSONA AY IYAGU KA HOGAAMIYAYAAL YIHIIN OO UU YAHAY MASHRUUC AY KA FURTEEN DHULKA WARSANGELI SI LOO DABAR JARO OO AY U HELAAN TAAGEERADA REER GALBEEDKA,TAANA WAXA U CADAYN AH AF-URUR OO MAALMO KA HOR AY PL SOO BANAYSAY SI LOOLA WAREEGO OO AY CAALAMKA UGU TUSTO MEEL KHATAR AH OO HOY ARGAGIXISO AH,SIDOO KALE WAAD MAQASHAAN DUQAYMAHA BARI EE AMERCANKU KA FULIYAAN.
Calanka. Jegaanta waa ashabaab waa hubaal inay tageraan. Iyaga ashaab oyo khanisnta way tageraan citiraafka kujira kudarso gaal cadana baa kiyiri dhulbahante yo warsangali xasuuqa. Citiraafka kujira taasaa keentay xuduuda beenta ah way ogyihiin sool iyo sanaag katagaan. Hargaysa iyo burco 200km degaan. Waxay rabaan yiraahdaan khanisnta school u furay citiraafka na tageera waliba sool waxay rabaan school khaniisiinta in lagafuro. Sanaag warsangali way diideen. Sarakisha warsangali way ogyihiin arinkaas tasa keentay I’m ay kabaxaan masmulka xun ee jegaanta dhulbahante wali isma oga.
Machadka daraasaadka amniga ee Hiraal ayaa soo bandhigay warbixin xog badan ka bixisay madaxda kooxda Daacish ee dalka Soomaaliya iyio beelaha ay kasoo jeedaan.
Haddaba magacyada hoos ka aqriso.
1-Sheikh Cabdulqadir Muumin waa hoggaamiye hore al-Shabaab ee Waqooyi Bari Soomaaliya.
Waxa uu oday dhaqameed u yahay beesha Cali Saleebaan, Majeerteen, Daarood waxa uu si weyn u abaabulay hoggaanka DAACISH isaga oo adeegsanaya qaab dhaqan qabiil.
Inta badan saraakiishiisa waa weyn waxa ay ka soo jeedaan Cali Saleebaan/Majeerteen, walow uu Muumin uu isku dayey in uu ku soo daro shaqsiyaad ka soo jeeda bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya oo ay ka mid yihiin qabiilada Hawiye, kuwaas oo ku badan Al Shabaab.
Muumin waxa uu haystaa laba dhalasho oo ay midi tahay UK,waxa uuna ku biiray Al Shabaab 2010kii.
2-Mahad Macaim Jajab (Oo Sidoo kale loo yaqaan Caaw Geele), waa hoggaamiyihii horeDacwada ee AL-SHABAAB, waana ku xigeenka Amiirka.
Sida Muumin, waxa uu ka soo jeeda Cali Saleebaan, Majeerteen.
Sida laga soo xiganayo Mareykanka oo ku daray liiska argagixisada caalamka bishii Febraayo.2018 waxa uu ahaa mas’uul ka ahaa in uu maraakiib ka caawiyey dagaalyahanno iyo Hub Soomaaliya ka soo galay Yaman.
wuxuu ka soo goostay Al Shabaab bishii December 2015 markaas oo uuahaa ku xigeenka dhaqaalaha AL-SHABAAB buuraha Golis. Waxa uu saldhiggiisu yahay gobolka Bari.
3– Cabdiraxmaan Faahiye – oo sidoo kale loo yaqaan (Axmed Aadan, Khaalid, Yacquub iyo Burane), waa Ciise Maxamuud/Majeerteen.
Waxaasidoo kale la warinayaa in uu yahay ku xigeenka Muumin. Waxa uu ka dambeeyey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Bosaaso ka dhacay bishii Maajo 2017.
4– Abuu Yusuuf, sidoo kale waa Majeerteen/Daarood waana muwaadin Mareykan ah, waxa uu qaabilsan yahay arrimaha dibedda.
5– Cabdixakiim Dhuqub, waxa uu hore u ahaa macallin Schooliyo hoggaamiye Al Shabaab oo gobolka Bari ah. Waxa uu ahaa isku xiraya Al Shabaab iyo kooxsi gaar ah dagaal yahanada u soo daabusha ilaa iyo 2014/2015. Waa jufada Ismaaciil Cali, Cali Saleebaan, Majeerteen, waana Inaadeerka Muumin. Dhuqub waa madaxa arrimaha siyaasadda ee DAACISH.
6– Xamse Farey waa madaxa Dacwada, waxa uuna ka bedelay Mahad Macallin. Waa Majeerteen/Daarood.
7– Macallin Bashiir oo sidoo kale loo yaqaan (Cabdullaah Buur) waa Majeerteen,waxaana sidoo kale la wariyey in uu ahaa madaxa Dacwada eeISIS.
8-Cabdiqani Luqmaan waa madaxa hawlgaladda Militariga. Waa midkood Cali Saleebaan ama Leelkase.
9– Abu Xafsa waa Gaaljecel/Hawiye waana ku xigeenka Luqmaan. Waxaa da’diisa lagu qiyaasaa 30 jir waxa uuna xubin ka ahaa Al Shabaab-ta gobolka Hiiraan. Waxaa ka qabaa in uu yahay diiwaan galiyaha dagaal yahanada Koonfurta Soomaaliya oo uu kala shaqeeyo in loo yaqaan Jabal.
10– Fahad Aboole waa Ogaadeen/Darood waana madaxa saadka ISIS.–
11Xamsa waa abaanduule ciidan, waa Xawaadle/Hawiye.
12– Jacfar Dabashan waa abaanduule Ciidan. Waa Cismaan Maxamuud/Majeerteen/Daarood.
13– Cabdirashiid oo loo yaqaan sidoo kale (Mukhtaar), waa madaxa haynta hubka waxa uuna xiriir la leeyahay kooxaha sida sharcu daradda ah ku soo galiya ee ka shaqeeya gobolka Waqooyi Barri (Cauluula iyo Qandala). Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in uu madax u yahay amniyaadka (Waaxda sirdoonka iyo mukhaabaraadka).
-Xubnaha kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah
Cabdiwali Maxamed Aw Yusuf “Walah” Waa Jifida Ismaaciil Cali, Cali Saleebaan/Majeerteen/Daarood;
Abshir Maxamuud Mire Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaan (Abshir Gardheere);
Jaamac Ismaaciil Said Saalax oo sidoo kale loo yaqaan (Jaamac Dheere); Axmed Cumar Cali “Beerdhagax” (Waxaa looga shakinsan yaahy in uu hubka keeno);
Cabdiraxmaan Yusuf Maxamuud Aadan; iyo Maxamed Bile Gash Yuusuf.
Waa wada Mj iyo Midhadh Dhashiishe ah iyo Midhadh Koonfurta Ah.
INTAASAA CADDAYN KU FILAN OO LA OGYAHAY.
INA GODANE HAL SHAKHSI BUU AHAA OO KOONFURTA TEGAY OO AY HOGAAMIYE U DHIIBTEEN KUNA HOGAAMIYAY WAXAY RABEEN OO AHAA QARAXYO IYO WAXAY ILAA MAANTA WADAAN.
MAJEERTEEN HA JOOJIYAAN HUUHAADA IYO RIWAAYADA AY KA WADAAN BARI OO AY KA RAADINAYAAN TAAGEERADA REER GALBEEDKA AMA HAW ADKAYSTAAN MARKA DRONES-KU DUQEEYAAN GADHOOWE,BOOSAASO INTAY FAJIDA U WALAAQAYAAN MASAAKIINTA WAROOS
MJ WAA FANNY WLHI
Caqli markaad Ku Dartaan anaka Puntland baa nagaga dayran Khatarta Kooxdaas.
Bal is-weydii Meel Nidaam iyo Laamo Amni KA jirto ma KA Suurto gashaa inta Layskasoo dhex maro inay jaarkeeda u gudbaan!!!!!!!??????
Haday Haa Tahay dee Garoowe ayaa hor ololi lahayd oo Qaraxyo Marti u noqon lahayd.
WAXASE UGU MUHIIMSAN OO MAHADDA NABADA SOMALILAND AAN U CELINAYNAA UGU HORRAYN ILAAHAY SWT,MARKA LABAADNA LAAMAHA AMNIGA SOMALILAND OO KA FEEJIG KHATAR KASTA OO DALKOODA KUSOO WAAJAHAN ILAAHAY HANAGA QABTEE IYO SHACABKA DALKAYAGA OO IYAGU KA GAADH AH NABADOODA.
Ilaahbaa Mahad leh.
PUNTLAND BAA NABAD AH EE MAXAY NABAD U TAHAY INAAN SABABTA KA DHIGO XIDHIIDH BAY LA LEEYIHIIN AL-SHABAAB MA CAQLI BAA ANOON KA FEKERIN SABABO KALE OO SUURTAGAL KA DHIGAY.
WAA XUME IYO XASAD AAD NOO QABTAAN,SE WAXBA NAGU YEELI MAYSAAN INSHA-ALLAAH.
VIVA CIIDAMADA QARANKA SOMALILAND EE KALA DUWAN EE LA’AANTOOD AANANU NABAD KU SEEXANEEN.
NIN LAGU SEEXDOW HA SEEXAN,XIL BAAD SIDAA HA SEEXAN.
WAXAY NAGAGA DAYRAN YIHIIN CADOW KASTA OO DHIB NALA JECEL.
NABADAADA INAAD SUGATAANA GOORMAY CEEB NOQOTAY.
FAASHIL BAROORTII WEEYE WAXAN PLTUMES QORTAY.
Viva Somaliland INTELLIGENCE oo Cid kasta oo lagu tuhmay Argagaxisanimo Cirka kala haada oo Jeelka Ku ilowda.
Viva Sir-doonka Qaranka Barakaysan.
Xamar,Garoowe waa joogaan,SI loola Socdo Shirqoolada lanoo maleegayo.
Midhadhka KA tirsani Shaqadaa Qaran bay hayaan oo ah
“ILAALINTA NABADDA IYO XASILOONIDA QARANKOODA BARAKAYSAN”.
Waxa Kale oo aanu Xogaha is-dhaafsanaa Sir-doonka Gobolka si looga feejignaado Dhagarqabayaashaas Qandaraaska kusoo qaatay Baabi’inta Dalkooda iyo Dadkooda.
Inaad Cawaan tihiin Nimankaasu hadday Cid u tudhayaan Dadkooday u tudhi lahaayeen oo Aabayaashood,Adeeradood,Qabiilkoodii degaan.
Idinka Majeerteen Mashruuciisaa Uun baa KA jira mana aha wax Qarsoon.
Waxan u jeedaa Idinka Mashruuciinaa aad ka macaashteen ee Dhaqaalaha Ku heshaan uun baa Ka jira oo Bari aad ka wadaan.
Bal yaanu idinla fogaan oo idin galaafan hungurigaasu iyo lacag doonkaasi.
Mise Qolyaha maamulka Ku Dulman baa Halkaa ay la gashay illeen RAG CIILKII CADAAB KA DOORAYEE
Abdulqadir Muumin baa Yaabay.
Kaagan iidoor ee magacyada badan isku hadal ku soo tabiyay horta ciidan ma lihidin ee waxaydun dhisateen maleeshiyo beeleed sida Soomaalida intooda kale. Dal dunida rasmi uga jira ayaa lahaan kara ciidan qaran iyo hayado dawladeed oo sharciyeysan. “Somaliland” dal dunida rasmi uga jira mise maamul federaalka Soomaaliya rasmi uga tirsan midna ma aha marka shuruucda, xeerarka, qawaaniinta iyo baratakoollada dawliga ee caalamiga iyo dastuurka federaalka lala tiigsado. Waa dhaqdhaqaaq fallaageed marka sharciyan loo hadlo.
Nadiib daro weyn iyo wax waaqiciga dhabta ah ka baxsan weeye andacoodkiina ah “cadaw” bay maleeshiyadeenu idin ka difaacdaa oo aydun laddaan. “Cadawgaasu” ma aha wax dhab u jira ee waa wax is kiin tusay oo maskaxda la idiin kaga shubay. Waa been iyo been abuur aan sal iyo raad toona lahayn waayo Soomaalidu isu cadaw ma aha oo ma jirto beel Soomaaliyeed oo xataa maankooda soo gali kara Isaaqa ku duula. Maxaa ku kallifaya? Maxaa se 30kaa sanadood loo arki ama maqli waayay Soomaali idin soo weeararaysa bal in aydun idinku khayaal iyo been aydun iska dhaadhiciseen ku nooshihiin? Xaggee bay joogaan cadawga aydun difaaca kaga jirtaan?
Xaqiiqaduu waxaa weeye iidooroow belaayo ayaa is kiin tustay oo idiin been sheegtay oo idinka weeye kuwa Soomaalida kale ee dariska la ah duulaanka ku ah. Hashaas geela inta ay cuntay cabaadkeeda laga hadhsan kari waayay waa uun idinka Isaaqoow ee cid kale ma aha.
Hadaananu Ciidan lahayn yaa kaaga Baqaaq siiyay ee Duleedka Gadhoowe kuusoo fadhiistay ee Cabaadkaaga laga yaabay.
Waadiga Ku Calaacalaya Mj ee leh Dhulka Maqan Xoreeyee ma lahaystayaashii baad ahayd.
Maxaad Nagusoo duushaan ma Nimaad Awoodiisa ogtahay ayaad ku fekerin inaad Soo weerarto soo Natiijada garan maysid
Nasoo weerar hadaad Awood hayso.
Tukaraq ka Dib Sanaag Bari ayaanu idinku Qaawin ee intaa diyaar garooba Oo habaarka Naga Ilaaliya illeen isha wax nagu yeeli maysaanee.
Dunidu waxaay ku nooshalay aqoon iyo run halka ay Harti halamash Kaga dhegtey Xin iyo xasad iyo ina godane
cayda iyo beentu hadhan beentu waa somaliland iyo shabaab baa xidhiidha runina waa nimcada alle kasakow nabada somaliland oo ku dhisan aqoonta iyo dadaalka ciidamada oo kaashanaya shacabka`